Ungachinja sei mbeva kana trackpad kumhanya pane macOS | Ndinobva mac
Imwe yesarudzo idzo vashandisi vazhinji vanokurumidza kugadzirisa pavanotanga OS kubva pakutanga kana pavanotanga Mac, ndeyekushandura pointer kumhanya kweMagic Mouse kana Trackpad. Iyi ndeimwe yeaya marongero ayo munhu mumwe nemumwe anoshandura mukuda kwavo uye zvakakosha kuti uzive izvozvo inogona kushandurwa zviri nyore uye nekukurumidza kubva kuSystem Preferences.
Tinogona kutaura kuti iyi sarudzo yave ichiwanikwa kwemakore mu macOS uye zvechokwadi inosiyana zvinoenderana nezvinodiwa nemunhu wega wega. Mune yangu kesi ini ndinoda inokurumidza pointer kuti ndikwanise kusvika kune iyo skrini yese nekukurumidza sezvazvinogona, asi kune vashandisi vasingazvifarire uye saka vanogona chinja kumhanya kuravira mumasekondi mashomaNgatione kuti zvinoitwa sei.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kuvhura iyo Panzvimbo yeSarudzo Panzvimbo uye tarisa mukati meMouse kana trackpad chikamu. Tichingori mukati tinogona kuona kuti maseru ekumhanyisa epa pointer anogona kugadziridzwa akazvimiririra mune ese kesi, pazasi pemitsara iyi yatinoona sarudzo inoonekwa paTrackpad uye iwe unongofanirwa kufambisa bhawa kune rimwe divi kana imwe kuti upe iyo yaunoda kumhanya:
Muchiitiko cheMagic Mouse isu tine mamwe marongero aripo, asi isu tinotarisa pane iyo inoti cursor kumhanya. MuMagic Mouse tine dzimwe sarudzo dzekumisikidza kufamba uye inyaya ye "kuyedza, kukanganisa" kwandinoti, kuchinjira munzira yedu yekushandisa mbeva. Saka chatinofanira kujekesa nezvacho ndechekuti kumhanyisa kweshoko ndiko kucharatidza shanduko asi isu tinogona zvakare kugadzirisa iyo Mupumburu kumhanya uye tinya kumhanya.
Izvo zvakakosha kugadzirisa uye kuyedza mune ese kesi kuitira kuti inogadzirisa kumhanya kwatinoda. Pane imwe nguva yagadziriswa, isu tinongobuda muSystem Preferences uye ndizvozvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Ungachinja sei mbeva kana trackpad kumhanya pane macOS
BMW inomira kubhadharisa muripo wepagore wekupa CarPlay